Sidee Raadiyayaashu u Arkaan una gujiyaan Natiijooyinka Raadinta Google | Martech Zone
Sidee baarayaashu u arkaan una gujiyaan natiijooyinka Google a Bogga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta (SERP)? Waxa xiisaha lihi, wax badan isma beddelin sannadihii la soo dhaafay - illaa inta ay kaliya tahay natiijooyin dabiici ah oo keliya. Si kastaba ha noqotee - hubso inaad aqriso joornaalka dhexdhexaadinta halkaasoo ay isbarbar dhigeen qaababka kala duwan ee SERP iyo natiijooyinka mid walba. Waxaa jira farqi muuqda marka Google uu leeyahay astaamo kale oo lagu daray SERP sida carousels, khariidadaha, iyo macluumaadka garaafka aqoonta.
Barta ugu sarreysa ayaa wali heleysa 83% dareenka iyo 34% ee qasabadaha SERP.
Dhexdhexaadintu waxay daraasad ku sameysay tan waxayna siisay a graphic weyn taasi waxay faahfaahin ka bixinaysaa isdhexgalka ka dhexeeya baarayaasha iyo xayeysiinta la kafaala qaaday, carousels, liisaska maxalliga ah, iyo liisaska dabiiciga ah. Guji faahfaahinta kor ku xusan si aad u aragto gebi ahaanba.
Dadku lama falgalaan bogagga natiijooyinka mashiinka raadinta ee Google si la mid ah sidii ay sameeyeen toban sano ka hor, inta badanna waxay ugu wacan tahay soo-saarista waxyaabo cusub oo ku saabsan SERP marka lagu daro liisaska dabiiciga ah (xayeysiisyada la bixiyay, natiijooyinka carousel, garaafka aqoonta, liisaska maxalliga ah iwm) ). Meeshii hore, baarayaashu waxay ku qaadan lahaayeen waqtigooda inay iskaan ku qoraan liistada kore si toos ah bidix ilaa midig, iyagoo akhrinaya cinwaanka buuxa, ka hor intaanay u dhaadhicin liistada xigta, waxa aan hadda aragno ayaa ah baaritaan aad u dhakhso badan, oo toosan oo toos ah ee liistada, iyadoo baarayaashu kaliya aqrinayaan 3-4 erey ee ugu horreeya liiska.
In kasta oo liistada ugu sarreysa ee dabiicigu ay qabsanayso ku dhowaad isla qaddarro la mid ah sidii ay yeellay 10 sano ka hor, haddana waxaan hadda aragnaa in ka badan 80% dhammaan bogagga riixa ee ku dhacaya meel ka sarreysa liistada 4aad ee organic, taas oo macnaheedu yahay in ganacsiyada ay tahay in lagu qoro meel ka mid ah aaggan SERP si loo kordhiyo taraafikada boggooda. Rebecca Maynes, Dhexdhexaadin
Dabeecadaha qaarkood iftiimiyay:
Kaliya 1% dadka isticmaala raadinta dabiici ah ayaa gujinaya Bogga Xiga
9.9% ee qasabno ah SERP waxay aadaan xayeysiiska ugu sarreeya
32.8% ee qasabnadu waxay aadayaan # 1 liiska noolaha ee SERP
Soo Degso Warqadda Cad ee Dhexdhexaadinta
Tags: duufaanheerka-riixctrdarajodhaqanka mashiinka raadintabogga natiijooyinka raadinta enginenatiijooyinka raadintaSEOserpgujisyada serpxarig ctrliiska serpxayeysiis kafaala qaaday
Baahida Jump: Suuqgeynta Saadaalinta iyo Sirdoonka Tartan